मध्यरातमा काभ्रेका जनताले गाेकुल बास्काेटाका कार्यकर्ता लखेटे ! « Bagmati Online
मध्यरातमा काभ्रेका जनताले गाेकुल बास्काेटाका कार्यकर्ता लखेटे !
काभ्रे । काभ्रेको चौरीदेउरालीमा गएराति नेकपा ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता बास बसेको घरमा आक्रमण भएको छ । संगठन विस्तार गर्न चौरीदेउराली पुगेका नेकपा ओली पक्षका नेताहरु बास बसेको घर र नेताहरु चढेको गाडी तोडफाड भएको हो ।
ओली पक्षको सोमबार वडा समिति गठन गर्ने कार्यक्रम छ । सोही कार्यक्रमका लागि आइतबार पुगेका ओली पक्षीय नेताहरु बास बसेको स्थानीय तिलकको घरमा आक्रमण भएको हो ।आक्रमणकारीहरु २०–२५ वटा मोटरसाइकलमा आएका थिए । तिनीहरुले बास बसेको घरमा ढुंगा हानेको र गाडी तोडफोड गरेको जनाएको छ ।
सोमबार हुने कार्यक्रमका लागि चौरीदेउराली ५ पुगेर लेखराज गौतम, रीता ढकाल, चुडामणी गौतम लगायतको टोली बास बसेको थियो । नेकपा ओली समूहका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सो आक्रममणको पुष्टि गरेका छन् । नेता बाँस्कोटाले सो आक्रमण प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सो घटनाबारे उनले ट्वीट गरेका छन्,
‘संगठन विस्तारको क्रममा चौरिदेउराली पुगेको नेताहरुको गाडिमा भर्खरै मार्चण्ड समुहले तोडफोड गरेको छ । बाईकमा चढेर आएकाहरूले छापामार शैलीमा बास बसेको घरमा आक्रमण गर्ने जंगली हर्कत गर्दै छन । जनमत कटेपछि गरिने यस्तो हर्कत सफल हुने छैन । आक्रमणकारीहरू कानूनी दायराबाट भाग्न सक्ने छैनन ।’
संगठन विस्तारको क्रममा चाैरिदेउराली पुगेकाे नेताहरुकाे गाडिमा भर्खरै मार्चण्ड समुहले ताेडफाेड गरेकाे छ।बाईकमा चढेर आएकाहरूले छापामार शैलिमा बास बसेकाे घरमा आक्रमण गर्ने जंगली हर्कत गर्दै छन।जनमत कटेपछि गरिने यस्ताे हर्कत सफल हुने छैन।आक्रमणकारीहरू कानूनी दायराबाट भाग्न सक्ने छैनन
— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) February 21, 2021